Isisindo esisebenza kanzima esisebenza nge-motor hammer mill chter cutter ngenjini yedizili eqhutshwa yinjini
I-Hammer mill chaff cutter ingumshini ohlanganisiwe owenziwe ngokotini kanye nomsebenzi wesando ngesando,esetshenziswa kabanzi epulazini,ukhuni nefektri yokondla, njll. Izinto ezingavuthiwe zomshini wamakhoba wamakhoba zingaqoqa utshani ,utshani ,Isiqu njllwhich kufanelekile ukwenza ukudla kwezilwane nokulima izinkukhu. Izinto zokwenziwa zokugaya ngesando zingaba izinhlobo zamabele, ukolweni,ukolweni ,irayisi ,amabele njll. Umgubo wokugcina ochotshoziwe ungaba ngu-0.8 ~ 8mm.Ungathola usayizi ohlukile wezinto ezichotshoziwe ngokushintsha isikrini.Umshini ungaqhutshwa yinjini yedizili nemoto kagesi.,i-petrol engine.we ingalinganisa amandla ngokwezidingo zakho.
Ngendlela yokuphila yomlimi, imfuyo yakha ingxenye enkulu. Ukuthola utshani obanele nokudla okunzima kulezi zinsuku. Ngakho-ke ukuze kuncishiswe ukuchitheka kwendala yobisi abalimi baqala ukusebenzisa umshini wokusika amakhoba, obeka phansi utshani ube yizicucwana. Lokhu kwenza ukuthi izinkomo zidle yonke ingxenye yotshani ngaleyo ndlela kunciphisa ukuchitheka.Chaff cutter is a mechanical device used to cut the straw or hay to vipande ezincane ukuze kuxutshaniswe ndawonye futhi bondliwe izinkomo. Lokhu kuthuthukisa ukugaya kwezilwane futhi kuvikele nesilwane ukwenqaba noma iyiphi ingxenye yokudla kwabo. Ngakho-ke ukukhuphula umkhiqizo futhi sinciphise amandla ngokomzimba adingekayo ukuze kuqhutshwe umshini umshini owenziwe imishini waba khona kungcono kakhulu kubalimi abasebenza ngobisi. Njengamanje umshini wokusika amakhoba uqhutshwa ngogesi kanjalo nenjini yedizili.
In inqubo yokuphakelwa kokuphakelayo kungenzeka kube nezithako eziningi ezidinga uhlobo oluthile lokucutshungulwa. Lezi zithako zokuphakelwa zifaka okusanhlamvu okusanhlamvu okuhlanganisiwe, ummbila odinga ukuncishiswa kosayizi bezinhlayiyana ozothuthukisa ukusebenza kwesithako futhi ukhuphule inani lesondlo. Kunezindlela eziningi zokufeza lokhu kuncishiswa kwezinhlayiya,I-hammer mill iyakwazi ukukhiqiza izinhlobonhlobo zamasayizi ezinhlayiya asebenza ngayo nganoma iyiphi impahla etholakalayo kanye nokulula kwe-fiber yokusebenzisa imali yokuqala lapho kuqhathaniswa nesigayo se-roller mill, ukulungiswa okuncane okudingekayo,izinhlayiya ezikhiqizwa kusetshenziswa isigayo sesando ngokuvamile ziba yindilinga, enendawo ebonakala i-polisher.
Izici zesando somshini wokugaya isando
1.Umshini wokusebenzisa izinto eziningi-umshini ungasetshenziselwa ukusika ifolishi eliluhlaza nokugaya okusanhlamvu.
2.Ubuchwepheshe obusha bokusika - Umsebenzi wokucwaninga kulesi sizinda wafundwa futhi kwenziwa izindlela ezintsha zokufeza inhloso oyifunayo.
3.Ezokuphepha- Okubaluleke kakhulu kunikezwa ukuphepha. Ngoba isetshenziswa kakhulu ngabalimi nomndeni wakhe ngakho-ke kulula ukusebenza nokuphepha.
4.Ukondliwa kokudla – Sondla ifolishi ngokusebenzisa i-hopper.Njengokuthi umkhombe wokudla unovulekile olukhulu & ubude obude lokhu kunikeza umhlahlandlela otshanini & okunye ukudla kwenyama okufana notshani bommbila owomile, utshani, ubhontshisi wesoya, Isiqu sikakolweni,kwenyusa ukukhiqizwa kwefodder.
5.Qoqa ifolishi kushubhu lokukhipha - Ngemuva kokujikeleza kokusika ama-blade, kubangela ukusikwa kokuphakelayo okuhlinzekiwe okufana notshani obomile bommbila kufomu ye-powder.Lawa masunisi akhanyayo wesisindo alahlekile ngamandla we-centrifugal wokusika blade abhekise kubhobho lokukhipha .So, isitsha sendawo sokuqoqa ifolishi.
6.Umsindo ophansi- Umsindo omncane,Idizayini enhle futhi ehehayo.
7.Isakhiwo esinamakhompiyutha- I-compact design yakwenza ukufaka umshini endaweni encane.
8.Ukukhetha amandla ahlukahlukene-Isando se-christ cut chack singashayela ngenjini yedizili ,injini yephethiloli ,motor kagesi.
Ividiyo esebenzayo yesando se-hammer mill choker cutter